Ixabiso Best Chinese Export New Crop Fresh Purple Red ...
thumela ngaphandle imifuno ethengisa ukutya okutsha okuyi-ginger
Ixabiso elifanelekileyo le-china isonka esitsha se-ginger esitsha
China Ihowuliseyili High Umgangatho uKhuphiswano Price Red f ...
Ukuthumela ngaphandle kwesiqhamo esitsha isiqhamo esinexabiso elifanelekileyo
thumela kwelinye ilizwe imifuno emitsha ethengisa iginger kunye negalikhi iyathengiswa
Izinto eziluncedo: icocekile, akukho zinambuzane, akukho ntsalela yokubulala izitshabalalisi, umbala omthubi, umzimba omkhulu otyebileyo, inqanaba eliphezulu Elona zinga liphezulu, incasa eyiyo, isondlo esisempilweni, umphezulu ogudileyo, umthubi ngaphakathi kunye notyheli ngaphandle, ilungele ukuthunyelwa ngaphandle kwihlabathi liphela inencasa eshushu kwaye inesiphumo sokunciphisa ibhaktiriya, gcina umzimba usempilweni impilo yeeshelfu inde kwaye ikwindawo efanelekileyo, inokugcina malunga neminyaka emithathu sinesityalo sethu sokuvelisa ukuvelisa ijinja entsha, ukuhlamba, ukucoca, ukugcina, ukupakisha ...
Imbali yeNdalo esempilweni ye-Organic Imbewu eqhelekileyo yeGarlic eNtsha
igalikhi inezibonelelo ezicacileyo zegalikhi enkulu, ijusi eshinyeneyo, isongo esicocekileyo kunye nencasa. Ngokutsho kombala webhalbhu weentlobo zegalikhi zinokwahlulwa zibe yigalikhi emfusa kunye negalikhi emhlophe.Imibala egalelwe igalikhi engaphantsi kwaye inkulu, i-spicy eyomeleleyo, isivuno esikhulu, ubukhulu becala isasazwe eMantla e-China, emantla ntshona nasempuma mpuma nakwezinye iindawo, ukumelana nokubanda kubuthathaka, ubukhulu becala ukuhlwayela intwasahlobo, ukukhula ...
ngexabiso elithengiweyo ngobuninzi begiligi epholileyo kunye nexabiso leengxowa zegalikhi
Indawo yokutyala igalikhi amazwe amakhulu ubukhulu becala akwi-China yamazwe aphesheya ukusuka eArgentina ukuya eIndiya eMzantsi Korea eUnited States amazwe ambalwa afana neFrance neSpain kwilizwe lethu yenye yezona zinto zithumela ngaphandle ilizwe lonke ukulima igalikhi kwaye indawo isasazeke kwiphondo lase shan dong. jin xiang ,, yong qiu zhongmou kwisiphaluka he nan phondo, da feng isixeko, jiang su kwiphondo pi zhou igalikhi yimveliso enamandla kakhulu yezolimo, amajelo okuthengisa ikakhulu axhomekeke kwi-g ...
Isivuno esitsha esitsha esiqhelekileyo isiTshayina esitsha esimhlophe sinegalikhi esithengiswayo
Kulinywe igalikhi enganyangi-ukungcoliseka kwegalikhi kukwenza ube sempilweni kwaye uqinisekise ukuba uphila ubomi obufanelekileyoIgalikhi yethu iyayithanda intle.Inganciphisa iintsholongwane kwaye igcine intliziyo ikwimeko esemgangathweni Owona mgangatho wegalikhi ukhethwe ngononophelo ukuqinisekisa ukuba wonke umntu unowona mgangatho uphezulu kunye nefom . Isandla segalikhi esikhethwe kumzi mveliso wakho, kwaye sinotyebelo lokulungisa, ifriji, ukuthuthwa, amava okuthumela kwelinye ilizwe Imvelaphi yeJinxiang igalikhi yokubonelela ngokuthe ngqo, iJinxiang County yidolophu eyaziwayo yegalikhi ...
1.Iapile sisiqhamo esimnandi, nesityiwayo somthi iMalus domestica. Sisiqhamo esisisangqa esinokuza ngobukhulu obahlukeneyo kunye nemibala enjengombala otyheli, oluhlaza okanye obomvu. Ii-apile zihlala zimnandi kakhulu kwaye i-cam ityiwa intsha okanye isetyenziswe ekutyeni, iisosi, ukusasazeka, iijusi okanye ipayi yeapile edumileyo. Imbewu ye-apile nayo ingatyunyuzwa ukuze kukhutshwe ioyile, esetyenziselwa ishishini lezithambiso. Iziqhamo ziqulathe ubukhulu becala iicarbohydrate, iswekile kunye nefayibha ngamanqanaba amancinci weprotein kunye namafutha. Ukuhla kwemveliso ...
I-China iVenkile ePhakamileyo yoKhuphiswano amaxabiso aBomvu kwi-Apple entsha
Ixabiso lesondlo sama-apile 1, iapile luhlobo lokutya okuncinci kweekhalori, zonke iigram ezili-100 zivelisa ubushushu obuyi-kcal ezingama-60. Izakha-mzimba zeapile kwizinto ezinyibilikayo, kulula ukufunxwa ngumzimba womntu, owaziwa ngokuba "ngamanzi aphilayo". Unceda ukuncibilikisa isalfure kunye nokwenza ulusu luthambe kwaye lithambe. 2, iapile "ineziqhamo zobulumko", "isiqhamo sememori" igama elincomekayo. Ukutya ii-apile ezininzi kudala kwaziwa ukuphucula inkumbulo kunye nobukrelekrele.Ama-apile atyebile kwiswekile, iivithamini, iiminerali kunye ...
Ixabiso lesondlo: ijinja entsha ine-detoxifying effect inzalo, ijinja kwijinja emzimbeni, oku kunokuvelisa i-enzyme ye-antioxidant, inamandla okumelana ne-oksijini radicals, kodwa ikwasebenza ngakumbi kunevithamini E. Ijinja inokuvuselela isisu esiswini. , kubangela iziko le-vasomotor kunye novelwano lwe-nerve evuselelayo, ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi, ukukhulisa ukusebenza kwesisu, isisu esibuhlungu, ukubila, ukusebenza kwe-antipyretic. I-Jiang ikwanyusa ukugcinwa kwejusi esiswini ...
Elona xabiso liphezulu kwelona xabiso liphezulu i-Shandong eshushu i-ginger esencinci etyheli
Iimpawu: Umphezulu ococekileyo, akukho zinambuzane, akukho bala, akukho hlumayo, akukho kubola, akukho mngundo, akukho lwanambuzane lunqabileyo, umzimba opheleleyo, umbala oqaqambileyo kunye nobukhazikhazi, inyama etyheli, ifayibha encinci, incasa eshushu ngokuphakathi, incasa emnandi yokupheka, isityebi isondlo kwimpilo yabantu. Ubomi obude obude, bunokufikelela ngaphezulu kweminyaka emi-2 xa igcinwe kakuhle. Ubushushu obufanelekileyo: I-12-13 degree. Iimpawu: 1.Ijinja egcina ukutya entsha ikhuliswa efama, ilinywa ngononophelo ngamafama, izinto eziphilayo azinangcoliseko, ...
Ixabiso elikhuphisanayo laseTshayina i-anyanisi ebomvu ebomvu iyathengiswa
1, itswele inefuthe lokusasaza ukuphola komoya, kuba iibhalbhu kunye namagqabi ee-anyanisi aqulathe uhlobo lweoyile eguqukayo ebizwa ngokuba yi-propylene sulfide, inevumba elimuncu, le nto inokumelana nokubanda, ukumelana nentsholongwane yomkhuhlane, inefuthe elibukhali le-bactericidal. Amatswele atyebile kwisondlo kwaye anevumba elirhabaxa.Ingavuselela ukuphuma kwesisu, amathumbu kunye nedlala lokugaya, yonyuse umdla wokutya kwaye ikhuthaze ukugaya. Ngaphandle koko, itswele alinawo amanqatha. Ioyile yayo ebalulekileyo iqulethe umxube ...
Amaxabiso asezantsi wokuThumela ngaphandle amaTshayina Ukutya okutsha okuNtsundu okutsha okuThengiswayo
Itswele lethu lisempilweni kakhulu elinemichiza ye-phytochemicals ekwaziyo ukusabela kunye nomzimba womntu ukuqala nokugcina impilo esempilweni. Sithumela i-anyanisi ngobukhulu obahlukeneyo kunye namabakala. Sithenga itswele ngokuthe ngqo kubalimi abaziwayo abalinywe ngokwendalo ngaphandle kokusebenzisa amayeza okubulala izitshabalalisi kunye neekhemikhali. Itswele lethu lisandul 'ukucoceka kwaye lipakishwe ngeebhegi zejuti ukuqinisekisa ubomi beshelfu ende. I-anyanisi yethu yahlulwe ngocoselelo kusetyenziswa amabakala, ubungakanani, incasa etyebileyo kunye ...
Akukho E 1703-2 Oosomashishini kunye netotshi yesithili esine-High-tech Zone iZibo City kwiPhondo laseShandong ePr China
ULAWULO LWABANTU NGOKUPHELELEYO KWIMVELISO ZEFAMA
Ixesha lesivuno itswele liphuma!
Zonke izityalo, yonke indlela ezantsi